Hal Su'aal Oo Aad U Baahan Tahay Inaad Ku Weydiiso Sahankaaga Xiga | Martech Zone
Su'aasha kaliya ee aad ubaahantahay inaad kuweydiiso sahankaaga xiga
Khamiista, Noofembar 9, 2006 Saturday, May 2, 2015 Douglas Karr
Saaxiibkeyga wanaagsan Chris Baggott wuxuu leeyahay wax weyn post maanta oo ku saabsan sahaminta. Waxaan heshiis guud kula jiraa Chris. Fadlan ha i weydiinin taladayda haddii aadan waxba ku sameyn doonin macluumaadka. Qof kasta oo i garanaya wuxuu garwaaqsan yahay inaan jeclahay bixinta ra'yigeyga… mararka qaarkood khalad. Saaxiibbaday gabi ahaanba way ogyihiin inay i aamini karaan.
Waxaa jira sababo dhowr ah oo tan:
Waxaan ahay qof jecel oo da 'weyn oo aan ciyaaro. Waxaan qiyaasayaa inay saacaddu hagaageyso, ee maxaad ugu garaacaysaa baadiyaha!
Haddii aan had iyo jeer sheego waxa aan ula jeedo oo aan u jeedo waxa aan idhaahdo, markaa dadka waaweyni waxay had iyo jeer iga heli doonaan sheeko isku mid ah. Way ogyihiin inaanan wax uun ugu sheegayn iyaga inay maqlaan waxay rabaan.
Laakiin… haddii aad sii waddo inaad weydiisato taladayda, ii sheeg inaad jeceshahay, ka dibna si joogto ah u diido… markaa ma doonayo inaan waqtigeyga kula maalgeliyo mustaqbalka. Taasi maaha in la yiraahdo ma diidi kartid, badanaa waan qaldanahay. Kaliya waxaan ula jeedaa in haddii dhiiri-gelintaadu tahay inaad bs igu dareento sida la ii qadariyo, ma doonayo inaan waqtigeyga kula qaato. Aniguna sidaas yeeli maayo.
Daraasaduhu waa sidan oo kale. Kama warqabo shirkad aan ka warqabin dhibcaha xanuunka ee macaamiil. Xaqiiqdu waxay tahay in shirkadaha badankood ay leeyihiin dad fahamsan dhammaan dhibcaha xanuunka ee macaamiishooda, waxa dadku ku raaxaystaan, iyo waxa dadku u adkeysan karin. Dhibaatadu waxay tahay inaanan isku mashquulin dhageysiga illaa aan diyaarsano. Taasi runti waa maxay sahan - waxay ku dhaheysaa macmiilkaaga, "Hagaag, waxaan diyaar u ahay inaan ku dhageysto… fadlan ii sheeg waxa aad jeceshahay iyo waxyaabaha aad igu neceb tahay."
Daraasaduhu waa inay diirada saaraan xagjirnimada miisaanka. Dhinaca saxda ah, su'aalaha la taaban karo ee ka dhalan kara jawaab cabirkeedu waa weyn yahay. Aniga oo i weydiinaya inaan qiimeeyo edeb darida concieriga waa wax lagu qoslo. Qof kastaa wuu ogyahay in daaqsintaadu ay edeb tahay iyo in kale. Weydiinta shaadhka cabbirka ah ee aan xidho si aan ula socdo oo aan kuu keeno mid ayaa weyn. I weydiinta haddii aan jeclahay A v iyo B waa wax aad u fiican when gaar ahaan marka aad dib u wacdo kii aan doortay.
Dhinaca kale ee miisaanka sidoo kale waa muhiim. Saaxiib kale, Pat Coyle, ayaa sheeko ila wadaagay hal mar oo ay shirkad kaliya hal su'aal ku leedahay sahankooda…
Ma kula talin lahayd saaxiib?
Xaqiiqdu waxay tahay in qof shirkaddaada ka mid ahi ogyahay waxa lagu horumarin karo. Way ka baqi karaan inay dhahaan. Ama waxaa laga yaabaa inaysan haysan iibsasho ay ku hagaajiyaan. Ama, inta badan maahan, waxay ogyihiin in aan la hagaajin doonin ee maxaa loo dhibayaa. Haddii aadan dhageysan doonin shaqaalahaaga, fursadaha ayaa ah inaadan dhageysan doonin macaamiishaada.
Sahamadu sidoo kale waa calaf si 'loo taageero' waxaad aaminsan tahay. Maamulaha u sheeg 10-ka shey ee ugu sareysa ee ay u baahan yihiin inay saxaan iyadoo lagu saleynayo baaritaankaaga mararka qaarkoodna si fudud ayaa laguugu eryi karaa inaad tahay qof waalan. LAAKIIN… waxaad ka bixisaa dhowr boqol oo muunadyo kala sooc ah macaamiishaada kuwaas oo taageera 10ka shay ee ugu sarreeya, oo si lama filaan ah ayay dadku u dhageystaan. Taasi miyaanay murugo lahayn? Sidaas ayaan u maleynayaa!
Uma soo jeedinaayo inaad jarto isgaarsiinta macaamiishaada. Wax yar oo iska soo horjeed ah, waxaan ku leeyahay FOCUS xiriirka macaamiishaada. Daraasaduhu ma ahan xiriir. Waa dhif laba-dhinac. Marka jooji inaad sameyso. Shaqaalahaagu ha kuu sheegaan waxa macaamiisha dhahayaan oo hagaaji.
Hadana haddii aad runtii jeceshahay waxa ay macaamiishaadu ka qabaan adiga, hal su'aal oo fudud ayaa kugu filan:
Tags: sahanka macaamiishahal su'aal sahaminsahansu'aalaha sahanka
4 Ilbiriqsiyo ama Bust
Goorma ayuu Old Spice noqday qabow?
Jun 7, 2016 saacadu markay ahayd 3:34 AM